News | Tag: mobile
एजेन्सी । प्रविधिको परिवर्तनसँगै हरेक महिनामा नयाँ–नयाँ स्मार्टफोनहरु उत्पादन भइरहन्छन् । अहिलेको बजारको अवस्थाको कुरा गर्दा नयाँ कम्पनीहरुले पनि आकर्षक फिचर्सहरुसहित स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ ।
मोबाइल धेरै चलाउनेमा यस्ता समस्याहरु देखिन्छन्
एजेन्सी । ‘नेचर साइन्स’मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार स्मार्टफोनममा अधिकांश समय युवा–युवती अनलाइनमा या सामाजिक सञ्जालहरुमा बिताउँदा डिप्रेसनजस्तो मानसिक रोगको शिकार हुने गरेका छन्। नयाँ–नयाँ उपकरणहरुले मानिसको दैनिकी सहज त भएको छ, तर अत्यधिक प्रयोगले समस्या पनि उब्जाएको छ।
यस्ता कारण तपाईको मोबाइलमा बारम्बार समस्या देखिने गर्छन्
एजेन्सी । तपाई हाम्रो फोनलाई खराब गर्ने यस्ता साधारण समस्या रहेका छन् जो जानेर होस् वा नजानेरै होस् हरेक प्रयोगकर्ताहरुले यस्तो गल्ती गरेकै हुन्छन् । जसले गर्दा पछि मात्र हामी पछुताउने गर्दछौ ।
काठमाडौँ । खानेपानी प्राविधिक रामबहादुर भट्टलाई मुहानसम्म पुगिरहनु पर्दैन । घरमै मोबाइल थिचेर गाउँलेको धारामा पानी खसाल्छन् । बस्ती र महानको दूरी करिब ७ मिटर छ ।
मोबाइल हरायो प्रहरीमा उजुरी गर्नुहोस्
भादगाउँ । मध्यपुर थिमि–१ लोकन्थली बस्ने अरविन्द आचार्यको सामसुङ ग्यालेक्सी जे फाइभ मोबाइल सेट सार्वजनिक यातायातमा बालकोटबाट कौशलटार आउने क्रममा हरायो । उनले महानगरीय प्रहरी वृत्त थिमिमा गत मङ्सिर २३ गते मोबाइल पाकेट मारेको भनी निवेदन दिए । प्रहरीले खोजतलासको क्रममा सो मोबाइल काठमाडौँको स्वयम्भूमा फेला पारी गत माघ १५ गते आचार्यलाई बुझायो ।
काठमाडौं । तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो ? फुट्यो या बिग्रियो ? अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइदिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ । अझै अर्को खुशीको कुरा त के छ भने हराएको या फुटेको मोबाइलबाट ‘डाटा’ या फाइल हराउने छैनन्, सबै भेटिने छन् ।